नेल फung्गी - तिनीहरूलाई ASAP उपचार गर्नुहोस्! | बेजिया
नेल फg्गस: तिनीहरूलाई सकेसम्म चाँडो उपचार गर्नुहोस्!
सुसाना Godoy | 15/05/2021 14:00 | कल्याण
के तपाईंसँग नेल फg्गस छ? जे होस् toenanenes जहिले पनि एक समस्याको रूपमा लिईन्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ, कहिलेकाँही तीनिहरू पनि हाम्रो हातमा देखा पर्दछन्। यो त्यस्तो चीज हो जुन सानो स्पटबाट सुरू हुन सक्छ र संक्रमणको प्रगति हुँदै जाँदा अझ गहिरो कुरामा बग्दछ।
त्यसकारण, दुबै खुट्टा र हातहरूमा हामीले यसलाई सकेसम्म चाँडो उपचार गर्नुपर्दछ। यो यसको मतलब यो होइन कि यो सँधै गम्भीर समस्या हो, किनकि प्राय जसो केसहरूमा यो हल्का संक्रमण हुन सक्छ र औषधीको रूपमा उपचारको आवश्यक पर्दैन। आज हामी तपाईंलाई सबै कुरा भन्छौं ताकि तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ, यसको लक्षणहरू जान्न सक्नुहुन्छ र पक्कै पनि उनीहरूलाई सकेसम्म चाँडो उपचार गर्नुहोस्।
1 कसरी जान्ने यदि मसँग नailफफुग छ भने
2 फिंग्नेल फg्गसबाट मुक्त हुन के गर्ने
3 सबै भन्दा राम्रो बानी आफ्नो न nails को ख्याल गर्न
कसरी जान्ने यदि मसँग नailफफुग छ भने
हातहरू सबै प्रकारका उत्पादहरू, तापमान परिवर्तनहरू, इत्यादिमा सँधै खुला रहन्छ। त्यसोभए हामी भन्न सक्दछौं कि उनीहरूले हामीलाई थोरै कष्ट भोग्छन्। यसबाट सुरू गर्दै, यदि तपाईं जान्न चाहनुहुन्छ यदि तपाइँको हातमा फ fun्गस छ भने, त्यहाँ सँधै केहि संकेतहरू छन् कि कुञ्जी:
तपाईंले केहि याद गर्नुहुनेछ नेलको र changes्ग परिवर्तन हुन्छ। तिनीहरू सेतो र colorको अंशको सानो प्याचको रूपमा देखा पर्न सक्दछ तर यसले पहेंलो बन्छ। र यदि हामीले यसलाई पार गर्न दियौं भने, पहेंलो खैरो रंगमा बदलिन्छ।
तपाईं तिनीहरूलाई देख्नुहुनेछ धेरै अधिक कमजोर, भंगुर र ती अझ सजिलै फुट्छन्। यसका अतिरिक्त स्ट्रेच मार्कको श्रृंखला तिनीहरूमा देखा पर्न सक्छ।
अर्को लक्षण यो हो हामी तिनीहरूलाई अधिक मोटा र आकारहरू देख्नेछौं जुन तिनीहरूसँग मिल्दैन, asymmetrically।
केहि केसहरूमा र जब संक्रमणको प्रगति हुन्छ, कडा गन्ध बन्द गर्न सक्नुहुन्छ.
फिंग्नेल फg्गसबाट मुक्त हुन के गर्ने
अब जब हामी लक्षणहरू थाहा पाउँदछौं र ती खराब हुनु भन्दा पहिले तिनीहरूलाई सकेसम्म चाँडो निको पार्ने सल्लाह दिइन्छ। यदि तपाईं अझै सुरू गर्दै हुनुहुन्छ र यो हल्का संक्रमण हो, त्यसैले घरेलु उपचारहरू अगाडि आउँदछन्। किनभने उनीहरूसँग हामी त्यो लामो-प्रतीक्षित परिणाम प्राप्त गर्नेछौं। कुन हुन्?
एप्पल साइडर सिरका: क्षारीय गुणहरू भएको उनीहरूले PH लाई नियमन गर्दछन्। त्यसो भए यसको प्रयोग गर्ने मोड सजिलो हुन सकेन। तपाईंले आफ्नो हात सिरकामा डुबाउनु पर्छ र यसलाई लगभग १० मिनेटसम्म आराम गर्न दिनुहोस्।
लसुन: हामीलाई यो थाहा छ र बेवास्ता गर्न। किनभने लसुनसँग एन्टी-माइक्रोबियल गुणहरू छन्। यस अवस्थामा यसमा केही लसुन कुचल्न र प्रभावित क्षेत्रमा पेस्ट लागू गर्न सल्लाह दिइन्छ। यसलाई करीव २० मिनेट आराम गर्न दिनुहोस् र पानीले हटाउनुहोस्।
बेकिंग सोडा र निम्बू को रस: हामीले एक आधा चम्मच बाइकार्बोनेटको आधा निम्बूको रससँग मिक्स गर्नुपर्दछ प्यास्ट बनाउनका लागि। अब हामी यसलाई फेरि न theहरूमा लागू गर्नेछौं, हामी केहि मिनेट पर्खन्छौं र सामान्य रूपमा हटाउँछौं।
विक Vaporub: हो, यसले हामीलाई चिसो पर्ने बित्तिकै खाली गर्दछ र अब यसले फgi्ग निको पार्छ। तपाईंले बस प्रभावित क्षेत्रमा प्रत्येक दिन थोरै रकम लगाउनु पर्छ।
याद गर्नुहोस् कि यी प्रत्येक उपचार गरिसके पछि, सबै भन्दा सल्लाहकार कुरा यो हो कि तपाईं आफ्नो न nailsमा म्याइस्चराइजिंग क्रीम लागू गर्नुहुन्छ वा आफुलाई केही थोपा तेलको साथ मसाज दिनुहोस् जैतुनबाट बनेको
सबै भन्दा राम्रो बानी आफ्नो न nails को ख्याल गर्न
एक शक बिना, रोकथाम सधैं हाम्रो न nailsहरूको हेरचाह गर्न उत्तम उपायहरू मध्ये एक हो। राम्रो सरसफाइको साथै यस समयमा पनि हामी धुने पछि हाइड्रेसन बिर्सन सक्दैनौं। जब हामी तिनीहरूलाई काट्न जानेछौं, यो सिधा गर्नु उत्तम हुन्छ र यदि तपाईंसँग बढि सूचक छ भने, तपाईं यसलाई फाईल मार्फत छुनुहोस्।
साथै इनामेलको उचित प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ। नailsहरूले सास फेर्नु पर्छ र जब हामी हरेक हप्ता तामचीनी परिवर्तन गर्दछौं, हामी झूटा न nailsहरू आदि छान्छौं, यो उनीहरूको लागि अचानक परिवर्तन हुनसक्दछ। के कारण उनीहरुलाई रंग परिवर्तन हुन्छ र त्यसले केहि संक्रमण उत्पन्न गर्न सक्छ। अब तपाईंलाई नेल फg्गसको बारेमा बढि थाहा छ!
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » कल्याण » नेल फg्गस: तिनीहरूलाई सकेसम्म चाँडो उपचार गर्नुहोस्!
घर सफा गर्नका लागि सेतो सिरकाको uses प्रयोगहरू
तपाईंको बच्चाहरूलाई कसरी लचिलोपन सिकाउने भनेर